Tandremo ! Fisolokiana tolotr'asa sy vente en ligne • Madagossip
il y a 1 année 3.6 K
Attention arnaque ! Tandremo mpisoloky !
Tsy vita ny hikipy hijery anareo ho hararaotin’ny olona fotsiny eo ka tsy maintsy ho raisiko ihany ny andraikitra. Koa manasa anareo ary hamaky hatramin’ny farany.
Raha nahatsikaritra ianareo dia nirongatra tato ho ato ny « tolotr’asa milaza fa mitady olona hiasa en ligne, izay tsy ilaina hafa tsy Facebook sy Compte mobile (MVola, Orange money, Airtel money). Anisan’ny mba mitady zavatra afaka atao vadin’asa koa ny tenako ka mba nandefa MP tamin’ilay olona nandefa ny tolotr’asa.
Feno fitaka ny tany
Rehefa namaly ilay olona dia nomeny anarana page aho (izay tsy ho tononiko eto) ary nasainy nampiditra code fa hisy tompon’andraikitra hono handray ahy. Rehefa avy nampidiriko natao message tao amin’ilay page ilay « code » dia misy « Tchatbot » (izany hoe logiciel mamaly anao automatique) nanome ahy rohy (lien) hafa hahitako ny mombamomba ilay tolotr’asa. Izany hoe tsy misy olona nandray ahy mihitsy hatreto.
Rehefa tonga ao amin’ilay pejy ny tenako dia misy sary 9 ao manazava ahy momba ilay tolotr’asa. Misy lahatsoratra maro be dia misy sary fiara tsara tarehy, trano mijoalajoala, fianakaviana mifaly manao vacances eny amoron-dranomasina. Raha manao ilay asa hono ny tenako dia ho tanteraka daholo ireo faniriako rehetra.
Ny fomba fataony : raha olona maivan-doha dia roboka tsara mihitsy. Fa ny tenako nefa efa manana expérience maromaro amin’ireny arnaque/ fisolokiana amin’ny Internet ireny ka mba efa mailo.
Raha samy mivarotra ilay boky…
Ny tena marina dia tsy misy tolotr’asa izany ho anao, fa ny zavatra asainy ataonao dia mividy boky (PDF) fampianarana teny vahiny, izay tsy misy dikany akory. 5000 AR no vidin’io boky. Lay asa izany lasa tsy misy indray fa lasa ianao indray no mpanjifa. Fitaka voalohany izay satria tsy tokony ho takiana vola izany ianao.
Rehefa avy mividy an’ilay boky ianao, dia asainy mitady olona vaovao maromaro indray hiditra amin’ilay tamazotra ka hividy an’ilay boky. Io ilay fitaka faharoa. Dia otran’izay hatrany hatrany ny fomba entin’zareo miady.
Mba tsy hahatonga ny olona hiahiahy dia mampiasa voambolana vahiny ry zareo : MLM, MARKETING de niveau, E-Marketer, sns.
Arnaque Vente Pyramidale
Nefa dia arnaque na fisolokiana tsotr’izao io. Io tompoko no antsoina hoe VENTE PYRAMIDALE na SYSTEME PYRAMIDALE. Tadidio fa ilay olona namorona an’ilay page no hahavidy fiara, trano, hivoaka any ivelany fa ianao mividy ilay boky sy sahirana mitady olona dia tsy hahita tombony amin’io akory.
Izay no maha Pyramidale azy satria ilay olona eny an-tendron’ny Pyramide no mahazo tombony, fa ilay « membre » tena miasa mitady olona dia tsy hahita tombony amin’io, sady very vola no very fotoana.
Lay referals lazainy io le olona « recruté-nao ». Raha olona iray mampiditra olona 40, avy eo ireo olona 40 ireo mampiditra olona efa-polo tsirairay avy. Efa mihoatra ny olona 64000 no azony. Dia raha ireo olona 64000 ireo (niveau 3 fotsiny io a, na line 3) no mandoa 5000 Ar avy, dia efa mahita 320 000 000 Ar; dia raha ataoko hoe 10% amin’io fotsiny no raisin’ilay namorona an’ilay page efa mahazo 32 000 000 Ar izy tamin’ny fomba tsotra sy famitahana olona.
Iza no mahazo tombony ?
Afaka toriana tsara eny amin’ny Inspection du travail ny fisolokiana tahak’itony. Mino aho fa hitan’ny tompon’andraikitra an’ilay page ito publication ito ka mba handinika tsara izy satria fandikan-dalàna io ataony io.
Misaotra tompoko naharitra namaky hatramin’ny farany fa somary lavalava nefa tsy maintsy natao.
Atsipy ny tady eny an-tandroky ny omby, atsipy ny teny any am-pon’ny manam-panahy.
Tagsarnaque fisolokiana pyramide travail en ligne vente en ligne
Fisolokiana amin’ny Mvola, Orange Money, Airtel Money : efa maro no tratra toy ity ka mitandrema